Soo dejisan Samsung Kies 3.2.16084.2 iyo 2.6.4.17113 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: Samsung Kies
Samsung Kies – software ah si ay u maareeyaan telefoonada gacanta iyo kombuyuutarrada gacanta shirkadda Samsung ee. software The awood si aad u cusboonaysiiso nidaamka qalliinka iyo software oo aad qalab, aragtida iyo abaabulo xogta shakhsiga aad, muusiko dhegayso, iwm Samsung Kies taageertaa .Wadashaqayntaas xogta u dhexeeya qalab iyo computer adiga oo isticmaalaya Bluetooth, USB ama Wi-Fi. Sidoo kale Samsung Kies kuu ogolaanayaa inaad soo bixi codsiyada ka adeega Samsung Apps iyo waafajinta xiriirada ee Microsoft Outlook, Google iyo Yahoo.
habab kala duwan la xidhiidha
Search xogta by keywords
العربية, English (United States), Українська, Français (France)...
Soo dejisan Samsung Kies
Faallo ku saabsan Samsung Kies
Samsung Kies Xirfadaha la xiriira
"HandBrake" – waa qalab lagula shaqeeyo feylasha fiidiyowga oo loo beddelo qaabab kala duwan. Software-ka wuxuu la shaqeeyaa cinwaan hoosaadyo wuxuuna kuu oggolaanayaa inaad dalbato shaandhayaasha ama codeodeyaasha markii la beddelayo.
Ableton Live – waa barnaamij lagu abuurayo istudiyaha muusikada ee noocyada kala duwan. Softiweerku wuxuu taageeraa qalab fara badan oo muusiko ah iyo tiro badan oo ah natiijooyinka dhawaaqa kala duwan.